Miaraha aminay amin'ny Expo momba ny fiompiana faha-19 ao Nanchang
Ny Expo momba ny fiompiana faha-19 (2021) dia hatao manomboka amin'ny May18 ka hatramin'ny Mey20 ao amin'ny Centre Expo International Nanchang Greenland. Ny trano heva misy anay: No.6B14. ao amin'ny efitrano B6 an'ny faritra masinina akoho amam-borona. Manantena ny hahita anao amin'izay. Amin'ity foara ity, Fuzhou Min-tai Machinery Co., Ltd. hampiseho ny vokatra azo avy amin'ny grady atody pac ...
Fanadiovana mora sy fanaparitahana masinina mpanadio atody mpanadio atody
Miaraka amin'ny fanatsarana ny fari-piainana sy ny famariam-bahoaka ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny hevitra ara-pahasalamana, ny mpanjifa dia manana fepetra ambony kokoa momba ny kalitaon'ny atody. Ny fitakiana supermarket amin'ny atody misy marika dia mitombo miandalana. Ny atody tsy tohizina dia holavina ...
Ny milina fanodinana atody tsara kalitao MINTAI dia amidy tsara sy mahomby amin'ny asany
Ny milina fanodinana atody tsara kalitao MINTAI dia mivarotra tsara amin'ny fahombiazany, ny endriny malefaka kokoa ary ny fikirakirana avo kokoa. Manao tsara kokoa izahay amin'ny antsipiriany rehetra momba ilay masinina. Ny milina mpanangona atody dia manampy ny toeram-piompiana na indostrian'ny fanodinana atody mitsitsy ny vidin'ny asa lehibe, zava-dehibe ...
Tsara ve ny milina fanasan-atody? Maninona no mampiasa milina fanasan-atody?
Ny milina fanasana atody dia tsy mamonjy asa fotsiny, fa mampihena ny tahan'ny fahavakisan'ny atody. Miharihary ny tombontsoa ara-toekarena. Ny fanasana, fanamainanaana ary labozia dia manao veloma ny fizotry ny fanodinana atody amin'ny endrika nentim-paharazana maloto sy misavoritaka, ary ny vokatra mifanaraka amin'ny maoderina ...
Inona avy ireo fiasan'ny mpiompy atody?
Mampiasa ny tambajotran-tseraserany manokana ilay mpikatroka atody hanodinana ireo signal hifehezana azy. Satria ny tambajotra toy izany dia misoroka ny fampiasana tariby marobe ary manome rafitra fanaraha-maso sy diagnostika mitambatra, miantoka ny fiasan'ny milina azo antoka sy azo antoka. Ny milina fanaovana grady atody ...
Famintinana ny fampirantiana tamin'ny septambra
THE EIGHTEENTH (2020) CHINA ANIMAL HUSBANDRY EXPO Amin'ity foara ity dia manamboatra milina roa ao amin'ny booth izahay. Masinina fanoratana sy milina fanangonana atody No .: MT-101-3 anarana: Masinina fanoratana sy masinina famonosana Parameter voalohany 1. Fahafahana: atody 25000-30000 isan'ora 2. Mifandraisa amin'ny tsipika fanangonana afovoany na atody ...
Fandaharana fampirantiana amin'ny volana septambra
NY Valo-polo (2020) CHINA ANIMAL HUSBANDRY EXPO Expo Fiompiana Biby Iraisam-pirenena China, fantatra amin'ny anarana hoe CAHE erak'izao tontolo izao, notontosaina tamin'ny 4-6 septambra fa tany amin'ny tanàna samihafa isan-taona, no fampisehoana biby fiompy lehibe indrindra any Azia! CAHE dia mety ho sehatra tonga lafatra indrindra ho fantatrao momba ny sinoa ...
Masinina peeler Fuzhou Mintai Masinina ahoana no tsy handratra atody?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-06-30
Atody dite, atody marinina, atody nandrahoina sns, izay nohaninay matetika dia mila voadio, noho izany mazava ho azy, atody be dia be no mila mpikotrana atody. Ka ahoana no tsy handratrànan'ny atody Fuzhou Mintai Machinary ny atody? Mino aho fa betsaka ny olona liana amin'izany. Tsy maintsy nihinana atody ny tsirairay, wh ...
Ahoana ny fomba hampihenana ny vidin'ny fampiasana ny masinina fanasana atody?
Ahoana ny fomba hampihenana ny vidin'ny milina fanasana atody. Ny milina fanasan-tsinay dia manana rafitra matanjaka, fampisehoana marin-toerana, tsy misy fanatodizan'ny atody, tsy milatsaka atody, androm-piainana maharitra. Miaraka amin'ny borosy nylon manokana, fanadiovana automatique automatique, izay tsapa tanteraka amin'ny fampiharana amin'ny famoahana atody an ...